Saddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanka ay ka geysteen meel u dhow Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSaddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanka ay ka geysteen meel u dhow Muqdisho
Saddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanka ay ka geysteen meel u dhow Muqdisho
August 29, 2018 Abdi Omar Bile Somalia 0
Maleeshiyada Al-Shabaab. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Saddex dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen gudaha Soomaaliya.
War-saxaafadeed ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Afrika Arbacadii, milatariga Maraykanka waxay sheegeen in weerarku uu ka dhacay meel qiyaastii 40 kiiloomitir koonfur-galbeed kaga beegan Muqdisho Isniintii (27-dii Agoosto).
Ma jiraan wax dad rayid ah oo ku dhintay weerarka, war-saxaafadeedka ayaa lagu sii sheegay.
Weerarka ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Tan iyo bishii Agoosto ee sanadkan, milatariga Mareykanka waxay qaadeen saddex weerar, oo lagu dilay sagaal maleeshiyo ah.
July 9, 2019 Ugu yaraan 20 qof oo lagu dilay dagaal ka dhacay Sanaag oo u dhaxeeya labo beelood oo katirsan Somaliland
December 31, 2018 Liiska baarlamaanka cusub ee Puntland oo la sii daayay
U.S. airstrike kills four Al-Shabab fighters near Mogadishu
Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya oo ku wargeliyay haayadaha aan dowliga ahayn ee caalamiga ah ee howlgala Soomaaliya in ay deg deg dalka ugu soo guuraan
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo ka codsaday dhinacyada ay ka dhaxayso colaada Gaalkacyo in ay dhowraan heshiiska xabad-joojinta
Garoowe-(Puntland Mirror) Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa ka codsanaya dhammaan dhinacyada ay colaadu ka dhaxayso ee Gaalkacyo in ay si buuxda u xushmeeyeen xabad-joojinta la kala saxiixday bishii [...]
Puntland oo iclaamisay Jimcada in ay tahay Ciidul Fidri
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa iclaamisay in beri oo Jimce ah ay tahay maalinta kowaad ee Ciidul Fidri, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Diinta Saalax Xabiib Jaamac. Related PostsAugust 23, 2018 Golaha Wasiiradda Puntland oo [...]
Ugu yaraan afar qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay xarun degmo oo kutaala Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen ciidamada booliiska. Qaraxa ayaa maanta oo Talaado ah lala beegsaday xarunta degmada Warta-nabada oo horey loo [...]